Howlgalo laga sameeyay Magaalada Marka oo lagu soo qabtay Maleeshiyo ka tirsan Alshabaab – Radio Muqdisho
Howlgalo laga sameeyay Magaalada Marka oo lagu soo qabtay Maleeshiyo ka tirsan Alshabaab
Maxamed Cismaan Yariisow oo ka mid ah Masuuliyiinta Maamulka Magaalada Marka ee Gobalka Shabeellaha Hoose ayaa ka warbixiyay Howlgalo ciidammada Xoogga Dalka ay ku qabteen in ka badan Labaatameeyo ka tirsan Maleeshiyadda Al shabaab.
“Qaar badan oo ka mid ah Nabad diika ayaa lagu soo qabtay howlgalo ciidammada Xoogga Dalka ay ka sameeyen Magaalada Marka, ciidamadana waxaa la shaqeeya kuwa deegaanka oo Al shabaab kala yaqaan, Howlgalada la sameeyay waxaa lagu qabtay 40 qof iyo ka badan, waxaana Al shabaabnimo ay ku cadaatay 20 ka mid ah dadkii lasoo qabtay”.
Yariisow ayaa sheegay in amniga Magaalada uu aad u wanaagsan yahay, ka dib wada shaqeyn xoogan oo dhex martay Ciidammada Xoogga iyo Shacabka magaalada Marka.
“Magaalada Marka markii hore Al shabaab dhinac ayay ka joogeen, waxayna dhibaateyn jireen dadka Shacabka oo fahmay dhagarta Argagaxisada, laakiin hada waxaa yimid Ciidamada Xoogga dalka gaar ahaan kuwa 14-ka Octoobar iyo Danab, shacabkana aad ayay ugu farxeen ciidan dowlad oo kala dambeyn leh, tababaro fiicana soo qaatay, Magaalada waa nabad galyo wax dhib ah ma jiraan”.
Saraakiisha Amniga ee ku sugan Magaalada Marka ayaa la wareegay ragan Shabaabka ah ee la qabtay, waxaana door weyn ka qaatay in lasoo qabto maleeshiyadan ku dhuumaneysay magaalada Shacabka oo soo gudbiyay xogtooda, iyagoona u tilmaamay Ciidammada Amniga goobaha ay ku dhuumaaleysanayeen Argagaxisada Al shabaab.
Madaxweynaha Algeria oo la dhigay Cisbitaal ku yaalla Geneva
Barnaamij Gaar ah: Bahda Ciyaaraha oo soo dhoweeyay dib u howlgalinta Tuulada Ciyaaraha